Siyakuhalalisela ngo-Mashi 8 osebenza nabo evesini, ku-prose: okusemthethweni, amahlaya
Izibonelo ezihlukahlukene zokuhalalisela ngokusekela kanye nezinkondlo zabalingani ngoMashi 8.
Usuku Lomhlaba Wonke Wabafazi yisenzakalo esimnandi sokuhalalisela isigamu esihle seqembu elisebenzayo kuleli holide. Phela, abesifazane, ngisho noma nje basebenzisana nabo emsebenzini, bavulele injabulo yimuphi umuntu, ukuhleka nokuzwa isidingo. Phatha abesifazane abathandekayo ngokuhalalisela kakhulu, ubapha umuzwa ongenakulibaleka we-spring magic, isidingo sabo nokungazinaki kwabo! Ngisho noma uhlela iholidi elincane kakhulu ehhovisi, kodwa kusuka enhliziyweni, thandaza ngokucophelela, abesifazane bayothokozeka! Wonke owesifazane ngo-Mashi 8 ufuna ukuzizwa ephakanyisiwe futhi azwe amazwi amahle ayibhekiswe kuye. Ngamangaza ithimba labesifazane ngokubonga, ngokukhuluma nabo besifazane ngamunye. Into eyinhloko ukuphakamisa ezinkulumweni zakho hhayi nje umlingani wesifazane, kodwa owesifazane onenhlamvu enkulu, enendlela yakhe enhle, enhle, enhle futhi eyingqayizivele!
Izifiso ezinhle abesifazane besiprose
Kuhle ukuhalalisela kubambisene nabo evesini
Izifiso ezisemthethweni kozakwethu ngo-Mashi 8
Izinkondlo zama-Comic zeqembu labesifazane ngo-Mashi 8
Ingxenye enhle yehhovisi lethu - ngeholidi elihle leSwitzerland, Ubuhle Nothando! Ngifisa sengathi ufuna okuvamile, kodwa okubaluleke kakhulu kuwo wonke owesifazane: uthando oluthakazelisayo, ihlombe lomuntu onokwethenjelwa, ukugcwaliseka kwazo zonke izifiso ngisho nokushaya, kanye nokuthuthuka okusheshayo kwezinga lomsebenzi!
Ithimba elingenabesifazane, lifana neplanethi ngaphandle kwezimbali! Madoda othandekayo, ngiyabonga ngalokho onakho, ngokugcwalisa izinsuku zokusebenza zokusebenza ngomusa, ubuhle nenduduzo! Hlala uhlale unomusa futhi ujabule njengeziqhwa zokuqala ze-snowdrops! Ngomhlaka-8 kuMashi, ilanga likhanya kuwe, izulu liluhlaza okwesibhakabhaka futhi i-choir yenyoni i-gaily ijabule! Vumela namuhla nonke, bathandekayo abasebenzi bethu, banezizathu eziyikhulu zokumomotheka!
Ngo-Mashi 8 uxhuma bonke abesifazane, yonke imisebenzi kanye neminyaka, ibe yinye - ngalolu suku uhle kakhulu futhi uhlonishwa. Vumela usuku luka-Mashi 8, abesifazane basehhovisi lethu bajabule futhi bangakhathazeki. Ngokuzithoba sifisa uthando nokuqonda ezikhungweni zomndeni, udumo kanye nempumelelo emsebenzini, kanye nokufudumala nokuzola ezinhliziyweni zakho. Njalo zonke izimbali ezinhle ziqhakaza - nje ngawe, madodakazi amahle!
Madoda namaDadewethu othandekayo! Akukona unyaka owodwa esadlula ngawo. Siyabonga, ukuthi ukhanyisa izinsuku zethu zokusebenza ngobuso bakho obuhle, amehlo namazwi! Ngingathanda ukukuhalalisela ngosuku oluhle kakhulu lonyaka, olunikezelwe abesifazane! Kuhle ngeminyaka! Ukuchuma kuwe emsebenzini wakho, injabulo ekuphileni kwakho!
Othandekayo bethu osebenza nabo, ubuhle bethu, namhlanje, ngosuku lwebesifazane emhlabeni jikelele, vumela wonke amacala alinde. Vumela abameleli be-imeyili bezinhlangano zangaphandle bathumele kuphela ukuhalalisela, amafeksi athola izifiso ezide kuphela, futhi itafula esikhundleni sezincwadi ezisemthethweni zizohlanganiswa nezimbali namaphostakhadi.
Othandekayo othandekayo! Siyajabula ngokuthi asibheki nje kuphela ngabachwepheshe abahle kakhulu, kodwa futhi nabesifazane abaqotho, ubuhle beqiniso nabesifazane abahlakaniphile. Siyabonga ngokuhlobisa ithimba lethu ngobukho bakho. Sifisa ukuba uhlale uhle kakhulu futhi ujabule. Siyanicela ukuba wamukele izipho zethu ezinesizotha njengesibonakaliso senhlonipho nenjabulo yangempela ngenxa yokuthi sinenhlanhla yokubambisana nawe.
Ngiyathanda amantombazane amancane! Sisebenze eqenjini elifanayo iminyaka eminingi, futhi kuyisihawu esikhulu ukuthi thina madoda sasingakutshelanga ukuthi ungowesifazane, ucwengisisiwe futhi uyamangalisa kanjani. Namuhla, kwiSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke, ngibonga bonke abantu, ngifisa ukuhalalisela ngeholidi lakho, ngifisa ukuba ugcine yonke impilo yakho, ubuhle nenhle. Siyabonga, amantombazane, ukwenza impilo yethu kanye nathi sibe ngcono futhi sijabule kakhulu.
Amantombazane ethu, ubuhle, ngalolu suku lwe-mimosa nama-tulips bafuna ukukuhalalisela futhi bathi ngiyabonga ngalokho oyikho. Nguwe ovusa kithi isifiso sokuza emsebenzini nokufeza impumelelo. Kuphela ngenxa yokubukeka kwakho kokulinganisa, iningi lethu lihlenga ekuseni bese sibeka ithayi. Ngakho ake uhlale unjalo nanamuhla, owesifazane omncane ohlakaniphile, ongokoqobo. Futhi, sizozama ukuziphatha ngendlela efanele, hhayi nje kuphela namuhla, kodwa nsuku zonke.
Othandekayo, othandekayo, othandekayo, yibo kuphela abahlala bebaluleke kakhulu, ngezinye izikhathi bengacasuli kahle, kodwa njalo bahlonishwa futhi ngokungangabazeki bahlonishwa ngokujulile, naphezu kokuhlambalaza kwakho nokuhlambalaza okuqhubekayo, thina siyaqonda ngokugcwele ukuthi uyasiza futhi okudingekayo ekuqhubekeni nasekuchumeni komphakathi wesintu kanye ngokwabo, othandekayo, ikakhulukazi. Ngikuhalalisela, ngiyakuthanda, ngifisa sengathi ukhazimulayo, okhanyayo, omuhle, omangalisayo, odingekayo, omuhle, ngokuvamile, okusemandleni kakhulu emhlabeni futhi okuningi!
Ukuhalalisela okusemthethweni ngoMashi 8 kubo bonke osebenza nabo besifazane
Madodakazi, sikulindele wena!
Ngomhlaka wesishiyagalombili ka-March sigijima emnyango!
Akulula ukuba abalimi kuleli holide -
Kumele bakhothamele phambi kwethu!
Ukuhlanza kuzowela emahlombe alo muntu eholidini,
Wena, futhi, usuzopheka!
Siphe izipho ezahlukene -
Indlela eya enhliziyweni yethu iyovuleka kakhulu kuwe!
Sifisa ukuthi uthande futhi ujabule
Singabantu bonke abantu.
Nonke impumelelo emsebenzini,
Ukuze uthathe isinyathelo sesinyathelo,
Futhi ngaso sonke isikhathi ube yi-premium
Sifisela wena ngosuku lwesifazane!
Ngo-Mashi 8, ngalolu suku lwentwasahlobo,
Kuwe, osebenza nabo, siyabonga,
Njalo ube mnandi futhi ube mnene,
Sinike isikhathi esihle kakhulu.
Vuka njalo ekuseni ngonyawo,
Ukuze ube emsebenzini ngaphandle kokulibala,
Futhi ungaqineli kithi,
Ngempela, kufaneleka ukunakwa kwakho!
Ngaphandle kwabesifazane emsebenzini, asikwazi,
Ngaphandle kwakho umsebenzi uzovuka, kucacile.
Ningabasebenzi bethu nabangani bethu,
Uhlakaniphile, unamandla futhi omuhle.
Mashi 8 siyakuhalalisela,
Kwangathi injabulo nothando kufudumele umphefumulo wakho.
Futhi ngalolu suku uzosho ngaphandle kokugqumisa -
Akekho emhlabeni ohle kakhulu futhi onomusa!
Siyakuhalalisela ngoMashi 8,
Akunabesifazane abahle kakhulu emhlabeni,
Ebhizinisi, ake uphumelele,
Futhi vumela izingane zakho zibe nempilo,
Ubuhle bakho buqhakaze,
Futhi imibono yamadoda ethu iyathokozisa,
Vumela zonke iziphupho zigcwaliseke,
Vumela konke ekuphileni kwakho kube ngendlela efanele!
Kusukela entwasahlobo ngezinye izikhathi
Vumela injabulo kanye ukumamatheka,
Ukufudumala kwenjabulo kunzima,
Umthombo wasemthonjeni omuhle.
Vumela wena, ozakwethu,
Ngamantombazane ehlobo lokuphumula,
Izochazwa ngokusho kwamavesi.
Vumela usuku luka-Mashi 8,
Inikeza i-caress evuthayo,
Ukuze wena nemizwa yakho,
Baqhakaza futhi baqhakaza,
Futhi wonke amaphupho okuphila,
Ngo-Mashi 8 usuku olukhethekile,
Isikhathi sokuncoma okuthobeka,
Izigqoko ezintsha, imihlobiso,
Isikhathi sama-tulips amahle,
I-snowdrops ngaphansi kweqhwa elidlulile,
Isikhathi sokuba sisondelane nezihlobo
Futhi ufisa okuhle kwabanye ozakwabo.
Amaholide aphumelelayo namabhonasi,
Vumela njalo ukuqhakaza nokuhogela,
Ithimba lethu labesifazane abanobuhle!
Othandekayo, othandekayo, enhle, emangalisayo, othandekayo besifazane! Yamukela ukuhalalisela okujabulisayo ngesikhathi sekhefu eliphawulekayo lokuphumula - ngoMashi 8! Amandla akho, umthwalo wemfanelo, isikhundla sokuphila okusebenzayo kuletha ukuvumelanisa komhlaba, umusa kanye nothando. Ngifisa ukuba njalo ujabule, unempilo, uhaqwe ngothando futhi unakekelwa. Vumela njalo uhambisane nokuzethemba esikhathini esizayo!
Ukuhalalisela kwangempela ngo-Mashi 8 kubambisene nabesifazane ku-prose
Ozakwethu othandekayo! Ngosuku oluhle ngo-Mashi 8 sigijimela ukuhalalisela futhi sifisa ukuhlala njengento enhle kakhulu, eyingqayizivele, eyomfazi futhi ejabulisayo njengamanje! Vumela la madoda awalandele, ebona ubuhle obunjalo! Futhi zonke izifiso zakho mazibe sezigcwaliseka, njengokungathi uzama umlingo wamagagasi!
Kusukela ngo-Mashi 8, abesifazane abathandekayo! Ngifuna ngobuqotho ukuhalalisela konke okuhle nobuhle besifazane. Kungenjalo - usuku lwabesifazane - kumele kube yiholidi lomuntu ngamunye owaziwayo. Umuntu ongenandaba namazinga emvelo nezinto eziza kuqala kubantu. Umndeni, umndeni, umama, udadewabo, ugogo, intombi - zonke lezi zimiso zinzima kakhulu kuwo wonke umuntu emphakathini. Futhi umuntu uyisimo sezenhlalakahle. Kubantu, ngaphezu kwalokho, intombazane, umfazi, ikakhulukazi umfazi - ukubonakaliswa kobudlova, isimo, ubulili, ukuqhubeka kokuphila. Iholide elijabulisayo kuwe!
Othandekayo besifazane! Vumela lolu suku luka-Mashi 8 kube ukuqala kwebhande eliqhakazile kakhulu empilweni yakho, ngakho-ke imizwa emihle kuphela ekhona, kuphela ukuhleka kwemizwa, ukumamatheka, ukuhleka nenjabulo! Futhi ukukhula ngokuzikhandla emsebenzini nokukhula kweholo! Jabulela, mnandi kakhulu futhi mnene!
NgoMashi 8 - imisebe yokuqala yasentwasahlobo kanye nokunciphisa izinyoni ezithobekile, umoya ugcwele ama-aromas ajwayelekile, afudumele ... Ngifuna wonke owesifazane ukuba abe nomuzwa wokuthi uyathandana nanamuhla, ukukhanya nobuhle bayo. Amantombazane othandekayo wethimba lethu, mangala ngokujabula futhi evulekile kuma-horizons amasha, amahle!
Ukubonga ngokusemthethweni ngoMashi 8 kuma-prose ozakwabo
Ngenjabulo ekhethekile ngokomzwelo
Sihlabelela ingoma kubesifazane,
Sibahalalisela ngenyanga kaMashi,
Ngokuqondile, ngosuku lwakhe lwesishiyagalombili.
Zijabulise zikhona izizathu -
Sithandeka umkhosi wezentwasahlobo!
La madoda mawaphuze namuhla,
Bavumele badle ngokumnandi.
Vumela izinkulumo ezinhle zikhulunywe
Futhi emva kokunakekelwa okunjalo,
Ukuthwala amahlombe akhululekile,
Bayothola ukuthula embhedeni.
Amadoda adinga izikhathi,
Emzimbeni ukuhudula empilweni, -
Ungabeki futhi abalala
Futhi ufundise izingane ...
Noma kunjalo, izitshalo ezishisayo
Vumela uhlangothi olude ludlule!
Vumela abanye abantu
Emuva kwabesifazane abathintekayo emuva.
Ngomhlaka lwesishiyagalolunye kaMashi, usuku lwentwasahlobo,
Ngaphansi kwelanga, iqhwa laqala ukuqubuka,
Namuhla, ukugcoba futhi kumnandi
Sifuna ukuhalalisela ozakwabo.
Hhayi kuphela kulolu suku, osebenza nabo,
Futhi sikuthandayo unyaka wonke.
Wena, njengamasondo enqola,
Umsebenzi unikeza ukuthutha.
Ungumuntu omuhle ngokumangalisayo,
Uphi - kukhona ehlanzekile futhi ekhululekile,
Wena - njengesisekelo seqembu,
Futhi njalo ulinde amadoda.
Ngiphuza wena, ngenxa yabesifazane bethu,
Ukuze intwasahlobo iqhume njalo,
Ukuhlala ndawonye esikhathini esizayo -
Ngoba lokhu ukuphuza konke kuya phansi!
Useduze nathi emsebenzini,
Nakuba ukunakekela ekhaya
Ngezinye izikhathi baseselele kuwe.
Thina, sonke isigamu sesilisa,
Sixolele namuhla, sibuze
Ngenxa yokuthi thina kaningi, amadoda,
Senza umsindo futhi siphikisana ngesizathu,
Ngenzuzo ikucasula wena.
Ake sinqume okuhle:
Namuhla, kusasa nangesikhathi esizayo,
Madoda, banakekele abesifazane,
Akuyona into ehlanganisayo - inkundla yezimbali:
Ukumomotheka kukhona okuzungezile!
Ngibheka ubuso obujabulisayo -
Kuwe akunakwenzeka ukuba ungathandani!
Ngomthombo omuhle ngezinye izikhathi
Umlilo uvutha ezinhliziyweni zabasha.
Nansi injabulo, uma kuhlale njalo!
Vumela isibuyekezo sithwale unyaka.
Ngifisa sengathi ujabule, impilo,
Ukunika abangani bakho uthando
Emkhayeni womndeni womusa,
Thanda ubuhle babathandekayo bakho.
Ngivumele ngifise wena
Injabulo, ukuthula nokufudumala!
Vumela inhlanhla ihambe,
Sense of amahlaya njalo!
Futhi kangangokuthi empilweni kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani -
Uzogcina amazwi ahlakaniphile:
Ngesikhathi lo wesifazane ehleka,
Ngakho owesifazane uphila!
Siyabonga ngokusebenza njalo
Ngo-Mashi 8, yibaluleke kakhulu!
Ngifuna ukufisa inhlanhla!
Ngifisa ukuthi umsebenzi wakho
Uhlale uhola phambili.
Ukuze ube nesibindi futhi ube nesibindi
Uhlala njalo uye emigomeni yakho!
Ukuhalalisela kwangempela amantombazane kusukela ngo-Mashi 8 kubafana - ngamagama, umbukiso womculo, ukusebenza - esikoleni nase-enkulisa - Imibono nezibonelo zokuthokozisa ama-classmates ngoMashi 8
Indlela yokudalula imizwa yendoda?
Izindlela ezinhle kakhulu zobulili obuphelele
Izinkukhu ezikhuniwe ezinkukhu
Indlela yokukhetha izindandatho zomshado: amathiphu awusizo
Amakhekhe we-chocolate nge sinamoni nekhadiamom
Ukuya esikhathini kungaba nokuqhubeka phakathi nezinyanga zokuqala zokukhulelwa